ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ စံရွှေဝင်း Westminster Foundation for Democracy (WFD) မှ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Sir. Hugh Bayley အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ စံရွှေဝင်း သည် Westminster Foundation for Democracy (WFD) မှ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် Sir. Hugh Bayley အား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် ရေးရာဆောင် အဆောင် အမှတ် (I-13) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံရာတွင် ပဋိဇီဝဆေးဝါးများ သိုလှောင်မှု၊ ဖြန့်ဖြူးမှုများတွင် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော အခက် အခဲများ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရပ်များ၊ ပဋိဇီဝဆေးဝါးများ အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေရေး၊ ဆေးဝါးများသုံးစွဲရာတွင် ဆေးဝါးအတုများ သုံးစွဲမှုမရှိစေရေးနှင့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဆေးဝါးများသာ အသုံးပြုနိုင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ဝေးလံခေါင်ဖျားသော ဒေသများတွင် ဆေးဝါးများ လုံလောက်စွာ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေး ကိစ္စရပ် များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။